China EB WEBBING SLINGS Vagadziri uye Vanotengesa | Chenli
▲ Chenli anosimudza chipfuramabwe izvozvi chave kutungamira bhizinesi muChina. Uye isu tiri kugadzira iyo yakakura-pamwero basa. Chenli ine mutsara wekugadzira wakakwana kubva pazvinhu zvakasviba kusvika kune zvapera zvigadzirwa. Kugadziriswa kwega kwega kune basa rakazvimirira, kugadzira kusimudza, ratchetta, bhanhire remota kubva 0.5T kusvika 3000T. Isu tinokwanisa kupedzisa kurongeka kukuru nekukurumidza.
▲ Chenli ikozvino ine seti yakazara yemagetsi yakakwana ekuedza michina, inova nechokwadi chekuti isu taigona kuvimbisa mhando yekutenderera kupfura, kubva pa 20T kusvika ku3000T, uye kudhonza matinji, kubva pa20T kusvika ku50T.
▲Kutarisana nenhamo yeMari, yega yega mutengi anoteera mari yepamusoro. Yedu yekuraira huwandu inosimudza ne40% ichienzaniswa neyekupedzisira gore. Tenda musimba remumwe, tenda kuna Chenli.
▲ Kubheta chipfuramabwe, dhizaini nyowani, uye nyowani yekugadziridza nzira yewebhu ndeyokupa kupa webwing slings kwakanaka kupwanya elongation.
▲ Iyo yakasarudzika yakarukwa yekuchengetedza uye zvishwe zvakasimbiswa zvese zvinopa kuchengetedzwa kubva kune abrasion uye kukuvara. Iyo ndiyo inovimbisa uye yakanyanya kureba hupenyu hwekushumirwa. Iyo yekubheka slings inogadzirwa munzvimbo dzakakwirira.
▲ Izvi zvinobvumira iyo chaiyo nhanho yekudzora kwemhando.
▲ Round sling ine iyo yakawanda mutoro unosvika kune 3000T, urefu hunoshanda kusvika kune 100m kuchengetedza chinhu chakagamuchirwa chinowanzove chi7: 1,6: 1.
▲ Round sling inogadzirwa neyepamusoro tension indasitiri yarn (100% PES), tambo dzemukati dzakaita senge fomu yekutenderera kusingaperi.Musuwo wekunze wakagadzirwawo ne100% PES, kwete yekutakura, asi kuchengetedza tambo mukati.
▲ Round slings ndiyo yakanakira mhinduro yekusimudza kwakakotsetseka kwemitoro, kungave kuri kuri kubasa kwako, kurodha nekuregedza kana kushandisa panzvimbo yekuvaka.Mukati wedenderedzwa unochengetedza zvinhu zvichisimudzwa.Kana chigadziko chikakuvara zvisizvo. ruoko rwekunze rwakavhunika, uye tambo dzemukati dzichabuda, saka chipfuramabwe hachigone kushandiswazve .Simbi yavo yakasimba uye yekumonera ichavimbisa hupenyu hwakareba, kunyangwe ichiri mukuenderera mberi kwekushandisa.
EB Webling Sling 'Kusimudza Nzira Uye Maximum Kuchengetedza Kushanda Mutoro wedanho.
ZVIRWERE ZVEKUPANDA ZVINOTAURA UYE ZVINYORA ZVAKADZWA
Tarisa kuti slings yakasimba here
Shandisa sleeve yekudzivirira kuitira kuti pakusimudza zvinhu nezvinhu zvakapinza.
Usatendera kudzoreredza mutoro pachifuramabwe. Usa dhonza mutoro pachifuramabwe.
Usanyanya kuomesa uye tarisa tembiricha.
Slings haambofaniri kuveurwa kana kukombamiswa.
Usashandise akakuvara slings.
EYE TYPE YENYAYA DZAKANAKA
Yepfuura: EB-CHIKAMU CHEMAOKO
Inotevera: ALUMINUM FERRULES NEWIRE ROPES
Chikuru Chikuru Sling
Kuenda Kumotokari Gwenzi
Synthetic Fiberi Sling
EB-B ZVINOTAURA ZVINHU